बिस्का जात्रामा यसो पो गर्ने कि ! - Online Majdoor
बिस्का जात्रामा यसो पो गर्ने कि !
९ चैत्र २०७६, आईतवार ११:५८
– के. श्रेष्ठ
भक्तपुरको एक महत्वपूर्ण र देशकै एक प्रसिद्ध बिस्का जात्रा सङ्घारमै आइपुगेको छ । तर, यो पटक स्थिति निकै गम्भीर छ । अहिले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको छ । त्यसैले यसपटक बिस्का जात्रा कसरी मनाउने भन्ने चर्चा यत्रतत्र सुनिन्छ ।
कोरोना सङ्क्रमण भीडमा धेरै हुने सम्भावना विज्ञहरूले ठह¥याएका छन् । एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच एक मिटर टाढा रहन भन्दै हात नमिलाउन भनिरहेका छन् । यस्तो भयावह स्थितिमा हजारौँ–हजार मानिस जम्मा हुने बिस्का जात्रा यसपटक बेग्लै ढङ्गले मनाउनु सबैको हितमा देखिन्छ ।
विगतमा भैरवको रथ निर्धारित स्थानमा पु¥याउन नसक्दा देवतालाई बोकेर ल्याई विधि–विधान पु¥याएको घटना धेरै छन् । त्यस्तै लिङ्गो पूरै नउठे पनि विधि–विधान पु¥याएका घटना छन् ।
यसपटक भैरवको रथ नै नबनाई देवतालाई अति आवश्यक व्यक्तिहरूले मात्र बोकेर लगी विधि–विधान पु¥याए अन्यथा हुनेछैन । त्यस्तै लिङ्गो उठाउने जमर्को पनि नगरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट लिङ्गोको गरिने पूजा र विधि–विधान सम्पन्न गर्नु उचित हुनेछ ।
मानिसको भीड हुन दिनु खतरा हुने भए पनि जिज्ञासा र उत्सुकता धेरैलाई हुनेछ । त्यसको निम्ति भैरव, नकिँजू, लिङ्गोको गरिने पूजालगायतका विधि–विधानको टेलिभिजन च्यानलहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा मानिसहरू घरमै रहने छन् ।
आशा छ, सुझावतर्फ सम्बन्धितहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनेछ । स्थिति र अवस्थालाई बेवास्ता गरी सङ्क्रमणको वातावरण निम्त्याउनु बुद्धिमानी हुनेछैन । धन्यवाद !
भारत कस्तो छिमेकी हो ?